Noofambar 2018 | RayHaber | raillynews
Hawlaha Kaabayaasha ee Demiraj OSB Sii wad
Mehmet Nebi Kaya, Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobollada Gaarka ah ee Sivas, wuxuu kormeeray kaabayaasha Aaga Wershadaha ee Demirağ kaasoo noqon doona saldhigga maal gashiga iyo wax soo saarka ee Sivas. [More ...]
Dhibaatada Gaadiidka ee Acemler 500 Million waxaa lagu xalliyaa maalgashiga
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş wuxuu xasuusiyay in cufnaanta taraafikada ee Acemler iyo Dikkaldırım ay korodho iyadoo furitaanka isbitaalka 950 iyo la wareegista, wadashaqeynta iyo wadooyinka isku xira garoonka. [More ...]
Wareegga loo maro Sagalassos
Ağlasun wuxuu dhammaystiray barnaamijka daraasadda suurta galnimada ee Wakaaladda Horumarinta Reer Galbeedka ee loo yaqaan '2018 Sanadka' ee Mashruuca Ropeway oo loo qorsheeyay in loo dhiso si loo fududeeyo marin u helka Sagalassos Magaalada Qadiimiga ah xarunta degmada Adeegga Tuulada. [More ...]
Toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaa lagu dhawaaqay in Moscow ay qarka u saaran tahay inay gaarto wado cusub oo gaadiid. Bishii Nofembar, 27 waxaa loo furay adeegga u dhexeeya Lujniki, Novaya Liga iyo Vorobyovi ​​Gori. Maalinta ku xigta waa inaad xidhaa [More ...]
Uludag Teleferik, Qaadashada Carabta!
Uludağ Cable Car waxay abaabushaa duullimaadyada 20 daqiiqad kasta oo 1 ah. In kasta oo xaqiiqda ah in gobolka hudheelada ee Uludağ uusan furneyn xilli wali, Teleferik waa 'Carab Carbeed'. Xaruntu waxay bilaabataa 9 subaxa hore oo aan kala go 'lahayn ilaa 7 fiidkii [More ...]
Bandhigyada Shirka Wershadaha ee Bursa, oo ah kulanka Bursa ee qaybta mashiinnada, ayaa albaabadiisa ka furay T FairYAP Bursa International Fair iyo Congress Center. 20 waxaa loo diyaariyey ka qeybqaadashada shirkadaha 346 iyo wakiilo ka socda dalka iyo 40 [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa bilaabay howlo dayactir ah oo lagu sameynayo wadooyinka naafada ah ee jaallaha ah (oo ah waddo laqarayo oo la arki karo) oo dabooli doonta wadooyinka tareenka, wadooyinka, xaafadaha iyo xaafadaha caasimadda. Wadarta jidka tareenka ee 131 kilomitir ee caasimada ayaa waxaa ku socda dayactir, [More ...]
Qaybta labaad ee Dowlada Hoose ee Magaalada Gaziantep waxaa lagusoo qabtay gudoomiyaha Latif Karadağ, Kuxigeenka Duqa Magaalada. Gazi ULAŞ AŞ, oo ku fidisa adeegyada gaadiidka dadweynaha bartamaha magaalada, [More ...]
RayHaber 30.11.2018 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 30.11.2018 ee nidaamkayaga.
Diyaargarowga Jiilaalka ee Istanbul
Dowladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa dhameystirtay diyaar garowgeedii iyada oo la adeegsanayo la dagaallanka xaaladaha jiilaalka. Dadaallada lagula dagaallamayo jiilaalka ayaa waxaa isku-dubbaridey Xarunta Isku-duwaha Musiibada ee loo yaqaan (AKOM). 7 kun 83 shaqaale ah iyo kun gawaarida 357 ah [More ...]
Iskuduwaha Targeted ee Iskuxirka, Iskuduwaha Nidaamka Isgaadhsiinta wuxuu socon doonaa 262 Km
IEKKK'da Izmir, oo bixisa macluumaad ku saabsan maalgashiga nidaamka tareenka ee Xoghayaha Guud ee Dawlada Hoose. Buğra Gökçe, "Waxaan higsaneynaa inaan gaarno nidaamkayaga tareenka xNUMX kilomitir oo kilomitir ah oo leh metro, taraam iyo jidadka tareenka" [More ...]
Liiska ugu dambeeyay ee Shaqaalaha 157 ee loo Bixinayo TCDD Taşımacılık A.Ş.
Turkey Business Association (TEO), wada jir ah ula daabacay in la qaado iyada oo loo marayo liiska kama dambaysta ah soo gudbiyeen TCDD Gaadiidka Inc. waxaa la helay shaqaalaha TEO 157. Liiska ugu dambeeya ee shaqaalaha 157 ee loo qoro TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]